ukuqeqesha ukudayiswa kwe-cashier ekwengeziwe emfundweni yesikhathi esithile
Thenga & Ukuthengisa
Ufunda ohlelweni ukudayiswa ukusebenzisana namakhasimende. Ujwayela ukukhulumisana okuhle (okushoyo nokungaqondile); Lokhu kufaka phakathi izinkulumo zokuthengisa (AVRUVOCO), amasu okuphatha ukungqubuzana, amasu okuxazulula izinkinga, ukubambisana, ukuxoxisana nokukholisa.
Uzofunda amasu okuzethulo namasu okuthengisa. Ufunda ukwenza i-checkout futhi ulondoloze isitolo. Uthola ukuqonda kwezebhizinisi nolwazi lomkhiqizo.
Okunye ukuqeqeshwa kokuthengisa
Ngaphezu kwe ukuqeqeshwa ukuthengisa Siphinde sinikeze ukuqeqeshwa umdayisi wezobuchwepheshe kuqhubeke. Lokhu kuqeqeshwa kugxile ekuthengiseni kwe-B-to-B. Uzofanelekela ibhizinisi le-DIY kwi-Technical Sales Program; indawo yokugcina impahla, nomthengisi wempahla yasendlini ....
Ugcina isikhathi futhi uhlelekile
Ukuqeqeshwa ukudayiswa (ibhokisi lokuthenga) lihlala iminyaka emibili kuya kweyithathu. Ungenza okuhlukile izitifiketi Thola umsizi, umsizi wesikhwama somthengisi kumthengisi.
Ukuzibonela akudingekile. Kodwa kubalulekile ukuthi ukhulume iDutch eyanele ekuthengiseni njengoba kufanele uhlale ukwazi ukuxhumana namakhasimende.
Uma ungabaza ukuthi ukuqeqeshwa kuyinto enhle kuwe, unganqikazi ukuxhumana nathi.
als umthengisi Uyaqashwa ezindaweni ezihlukahlukene umkhakha wokuthengisa; isibonelo, njengommeleli, umdayisi wezobuchwepheshe noma isisebenzi sokuphikisa. Ungaya emsebenzini esitolo, esitolo sokugqoka ...
Ngokuzibophezela okulungile, ukugqugquzela nokuqondisisa kwezebhizinisi, kukhona njalo amathuba okukhula ngaphakathi komsebenzi wakho.
Xhumana nathi ukuze uthole olunye ulwazi
Ngemuva kokuqeqeshwa ukuthengiswa komthengisi, ungaqala yini esinye isifundo sokulandelela kwenye indawo (isb. HBO5), ukuhweba ngamazwe, ukuthengisa ...